अब हाम्रो पालो - साप्ताहिक
प्रायः कथा कुनै न कुनै विदेशी फिल्मबाट चोरिएको हुन्छ अनि त्यो नक्कल पनि निकै कमजोर र भद्दा हुन्छ । निर्देशन अझ झुर हुन्छ । कथाअनुसार अभिनय हुँदैन । प्रस्तुति सबैभन्दा फितलो हुन्छ । त्यसकारण नेपाली फिल्म हेर्न मन लाग्दैन । पुरा पढ्नुहोस्
काठमाडौं बस्नेहरू १५ दिनका लागि चितवन जाने अनि काठमाडौं फर्कने । त्यसपछि थाहा हुन्छ काठमाडौंमा कति गर्मी छ भन्ने कुरा । पुरा पढ्नुहोस्
साप्ताहिक संवाददाता , जेष्ठ १९, २०७६
सम्पूर्ण राजपरिवारको हत्या गरी ज्ञानेन्द्रको परिवार र राजपरिवारका बाँकी सदस्यलाई केही नगर्नु भनेको यो सम्पूर्ण षड्यन्त्र ज्ञानेन्द्रको हो भनी देखाउन राष्ट्रघाती तत्वलाई हातमा लिएर गरिएको विदेशी षड्यन्त्र हो । यदि ज्ञानेन्द्र दोषी छन् भने राजदरबार हत्याकाण्डको पुनः छानबिन गरियोस् । पुरा पढ्नुहोस्
साप्ताहिक संवाददाता , जेष्ठ १५, २०७६
अरबतिर आउनुहोस्, सिकाइदिउँला । यता ४५ डिग्री तापक्रम छ । यतिबेला अरबमा काम गर्ने हामी नेपाली दाजुभाइलाई थाहा छ, गर्मी कसरी छल्ने भन्ने कुरा ? पुरा पढ्नुहोस्
साप्ताहिक संवाददाता , वैशाख २८, २०७६
आश्चर्य लाग्यो, आठौं आश्चर्य घोषणा गरौं । सबैलाई नेपाली तीनपाने चखाउन छाडेर विदेशी होली वाइन पिलाएरै छाडे । देशको हविगत यस्तो छ, उत्तर कोरियाका किमजोङ अनि खै कुन–कुन राष्ट्रलाई मिलाउन मेरो ठूलो हात छ भन्छन् । यिनलाई उतै खेदाउने हो कि ? विदेश धाइरहनुपर्ने थिएन । पुरा पढ्नुहोस्
साप्ताहिक संवाददाता , वैशाख २०, २०७६
प्रेस स्वतन्त्रताको उपभोग त बबालै भा’छ । त्यो देखेर मलाई पनि पत्रकार बन्न मन लागेर आउँछ । पुलिसले नगरेको काम र न्यायालयले फैसला नगरेको कुरामा निर्णय लेख्ने हिक्मत राख्छ हाम्रो पत्रकारिताले । खोज पत्रकारिताको त हिसाब नै बेग्लै । पुरा पढ्नुहोस्
आजसम्म जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको भएको छ । विकास–निर्माणको क्षेत्रमा केही आशा देखिए पनि भ्रष्टचारको क्षेत्रमा पूरै निराशा छ । पावरफुलहरूले जे गरे पनि कारबाही गर्न नसक्नु शेरबहादुरले भनेजस्तै छ, तर उनको जस्तो न बोल्ने ढङ्ग न काम गर्ने ढङ्ग भन्दाचाहिँ उत्तम छ । पुरा पढ्नुहोस्
हामी जनता हत्या, हिंसा, बलात्कार, प्राकृतिक विपत्तिजस्ता अनेकौं पीडाबाट गुज्रिरहँदा सरकारचाहिँ सुशासनको एवार्डदेखि लिएर भ्रष्टाचार, घुसपैठ आदिको खेलमा रमाउने प्रयासमा देखियो । पुरा पढ्नुहोस्
घुम्न जान त हुन्थ्यो । प्रहरीको फन्दा र ट्राफिक प्रहरीको ल्याङ–ल्याङ सुन्नुभन्दा, घरमै बसेर लोकल चिरिप्प पार्दै साथीभाइहरूसँग नयाँ वर्ष मनाउने विचार गरेको छु । पुरा पढ्नुहोस्